समुदायस्तरमा फैलिएको कोरोनालाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने? कोरोना भाइरसको संरचनामा आएको परिवर्तनले नयाँ भेरियन्टहरु उत्पन्न भएका छन् र मेडिकल विज्ञानलाई अझ चुनौती दिइरहेको छ। यो वर्ष कोरोनाले आफ्नो परिवर्तित संरचनासहित गाउँ गाँउ र समुदायस्तरमानै फैलिरहेको छ। आइतबार, जेठ ३०, २०७८
भ्याक्सिनेशन इज चिपर देन लकडाउन सरकारका लागि भने जनताको ज्यानभन्दा पनि प्यारो सत्ता देखियो। नागरिकको कोरोना उपचार र भ्याक्सिन खरिदभन्दा पनि सरकारका लागी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने र सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने प्राथमिकताको विषय बनेको छ। आइतबार, जेठ ३०, २०७८
कोरोनाः प्रमुख घटनाक्रलाई फर्किएर हेर्दा यस अन्तरालमा कैयौं वैज्ञानिकहरुद्वारा खोजमुलक अध्ययन अनुसन्धानहरु भइसकेका छन् र कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा अनेक उपलब्धीहरु भएका छन्। आइतबार, जेठ ३०, २०७८
विश्वमा सुर्ती सेवनको चिन्ताजनक नतिजा यो अभियानले आम सर्वसाधारणलाई सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्नेछ। सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको रणनैतिक योजना निर्माण एवं सुर्तीजन्य पदार्थको प्रकोप विरुद्ध लड्न जागरण अभियान संचालन गर्नेछ। बिहीबार, जेठ २७, २०७८
पारासिटामोलको अभावले जन्माएका प्रश्नहरु यातलाई घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने औषधिहरुलाई देश भित्र र बाहिर पनि पठाउन सकिने क्षमता बृद्धीमा प्रोत्साहन गर्दै अघि बढनु उचित देखिन्छ। आफ्नै उत्पादन हुनु र आयात गर्नुमा पक्कै फरक पर्दछ। बिहीबार, जेठ २७, २०७८
महामारीमा सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञहरूको भूमिका सामुदायिक चिकित्सालाई जनस्वास्थ्यको एउटा महत्वपुर्ण विषयको रूपमा मान्न सकिन्छ जसले जनस्वास्थ्य र क्लिनिकल मेडिसिनको बिचको ठूलो दुरीलाई कम गर्दछ र सामुदायिक चिकित्सकहरुले यी दुई विधाहरु बीचमा समन्वय गरी योगदान पुर्याउन सक्छन्। बुधबार, जेठ २६, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक वर्षमा तीन जना मन्त्रीसँग काम गर्ने मौका पाएँ नयाँ कानूनले नयाँ संरचना सहितको कुरा ल्याएको छ। हामीले त्यो कानूनलाई फरक ढंगले प्रस्ताव गरेका छौं। आउने बेला फरक ढंगले अध्यादेश आइसकेको छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने हामी सार्वजनिक प्रशासनको साथीहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। आइतबार, जेठ २३, २०७८
सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले पुर्‍याउने असरहरु के के हुन्? सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले अहिलेसम्म विश्वमा ठूलो जनस्वास्थ्य संकट परेको छ। यसले विश्वभरी वर्षेनी ८० लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ। सोमबार, जेठ १७, २०७८
सरकारले यस्तो गर्‍यो भने कोरोनाको तेस्रो चरणको लडाइँ सहज हुनेछ यस्तो महामारीका बेला सरकारले जनताको ज्यान जोगाउन तल्लीन हुनुपर्नेमा उल्टै फोहोरी राजनीतिमा लागेको छ। यो विडम्बना हो। सरकार जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुनैपर्छ। सोमबार, जेठ १७, २०७८
कोरोना संक्रमणविरुद्ध दिइने खोपबारे लिनैपर्ने जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर निको भएकालाई पनि फेरि यो संक्रमण हुनसक्ने हुनाले खोप लगाउनुपर्छ। सोमबार, जेठ १७, २०७८
सरकार छिटो भ्याक्सिन देऊ, लकडाउन बन्द गर भ्याक्सिन सकेसम्म छिटो जनतालाई देऊ अनि लकडाउन बन्द गर सरकार ! एक/दुई हप्ता या एक/दुई महिनाको लकडाउन जसोतसो झेल्न सक्छन् तर धेरै लामो लकडाउन जनताले झेल्न सक्दैनन्। सोमबार, जेठ १७, २०७८
एक सर्को धुँवामा रुमल्लिएको जीवन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष १ करोडको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको कारणले हुनेछ। जसमा ६० लाख विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका मात्र हुनेछन्। सोमबार, जेठ १७, २०७८
स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता कसलाई? यसरी हेर्दा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को परिच्छेद ६ को दफा ३८ मा ‘कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउने छ’ भनी लेखिएको भएतापनि सो अनुसार समयमै भत्ता पाउन नसकेको देखिन्छ। आइतबार, जेठ १६, २०७८
अझै सेतो कोट लगाउने सपना देख्ने? एकचोटी मनन गरौँ त यस्तो महामारीमा एक दिन मात्र उनीहरू हात बाँधेर बसिदिने हो भने यहाँ सबै ठाउँ मसान घाट बन्ने छ। उनीहरूले आफ्नो प्राणलाई हत्केलामा राखेकाले आज हामी र हाम्रो परिवार मृत्युसङ्ग जम्का भेट गरेर मृत्युको मुखबाट फर्किएका छौं। आइतबार, जेठ १६, २०७८
सरकार, स्वास्थ्यकर्मीको उपचारको लागि कोभिड डेडिकेटेट अस्पताल बनाऊ अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने बेला पनि हो। सरकारले कोभिड-१९ संक्रमणलाई चुनौती मात्र होइन अवसरको रुपमा पनि लिन सक्नुपर्छ। शनिबार, जेठ १५, २०७८
सेवा गर्नेमाथि हिंसा कहिलेसम्म? पछिल्लो समय उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा अस्पताल तोडफोड गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै हातपात गर्ने घटनाक्रम बढेर गएका छन्। वास्तविकता नै नबुझी यस्ता खालका हिंसामा उत्रनु कदापी कानुनसम्मत् हुन सक्दैन। शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
ग्रामीण परिवेशमा महामारी व्यवस्थापन ग्रामीण क्षेत्रका यो अप्ठेरा, कठिनाइ, अज्ञानता अनि चुनौतीहरुलाई पनि अब सम्बोधन गर्न सके मात्र महामारीलाई केही हदसम्म परास्त गर्न सकिन्छ भन्दा फरक नपर्ला। शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
संक्रमणको प्रतिरोधमा ज्वरोको महत्त्व र उपयुक्त खानपान ज्वरो शरीरको आवश्यक शत्रु हो। यसलाई औषधिद्धारा दबाउदा बिरामीलाई तत्कालको लागि सहज अनुभव भए पनि रोग निको पार्न कुनै योगदान पुग्दैन। बरु शरीरको रोग निको पार्ने क्षमतामा बाधा हुने सम्भावना रहन्छ। बुधबार, जेठ १२, २०७८
कोरोनाको अन्त्यः सबैको प्रतीक्षा अन्तत: भाइरसको न्यूनीकरण हुन गई निर्मुल हुन समय लाग्दैन। त्यसैले भाइरसबाट छुट्कारा पाउन आफ्नो ठाउँबाट पनि सक्दो प्रयत्न गरौं। मंगलबार, जेठ ११, २०७८
कोभिड-१९ को व्यवस्थापन, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विज्ञानको दर्शनशास्त्रीय भूमिका विज्ञानको दर्शनशास्त्रीय विधीको सही प्रयोग गर्न सकेमा पक्कै पनि कोभिड -१९ को व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा रोकथाममा उच्चतम सफलता हासिल गर्न सकिन्छ र पक्कै पनि यो रोगले मानव जातिलाइ पुर्याउने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। शनिबार, जेठ ८, २०७८
क्वारेन्टिनको इतिहास र वर्तमान यथार्थ क्वारेन्टिनले मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप एवं बन्देज लगाएपनि यो विगत झैं हाम्रै लागि हामीलाई नै सुरक्षित बनाउने एउटा सशक्त माध्यम हो। बिहीबार, जेठ ६, २०७८
अस्पताल ट्राइ गर्ने ठाँउ होइन: अस्पताल कस्तो हुनुपर्छ र के के भयो भने मात्र हुन्छ? अस्पताल ठुलो अठोट र निरन्तरको मेहेनतले मात्र चल्छ। र पुनःस्मरण गराउ अस्पताल जीवन मरणको लडाई लड्ने ठाँउ हो, त्यहाँ जुनसुकैबेला हामी आफैँ सुत्न पुग्न सक्छौँ, अस्पताल ट्रइ गर्ने ठाँउ होइन। मंगलबार, जेठ ४, २०७८
अहिले पर्खने र हेर्ने बेला हैन देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति नियम बनाउने र कार्य योजना तर्जुमा गर्ने पदमा यही बिषय वा सिद्धान्त पढ्नेको बाक्लो उपस्थिती पनि छ। तर पनि अहिलेको कोभिड-१९ को महामारीको अवस्था देशले सम्हाल्न किन सकेन? यो प्रश्न निकै गौण छ। सोमबार, जेठ ३, २०७८
कोरोना कहरको दास्रो लहर, सर्वदलीय प्रयत्न आजको आवश्यकता यो लडाईका सेना स्वस्थ्यकर्मी तथा हामी नागरिक हवौं। भीडभाडमा जाँदा को व्यक्तिलाई कोराना भएको हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यस करण हाटबजार तथा अन्य स्थानमा यदि जानुपर्ने हुँदा स्वयं सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। आइतबार, जेठ २, २०७८
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा अवकाश प्राप्त चिकित्सकको भूमिका र सरकारको अभिभावकत्व म एक जिम्मेवार चिकित्सकको नाताले सरकारलाई यो युद्ध मैदानबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु की जनताको संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकार, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्याको आधारमा दरबन्दी के पूर्ति भएको छ त ? कसले छेकेको छ दरबन्दि बृद्धि गर्न ? किन हुँदैन ओएन्डएम सर्भे? शनिबार, जेठ १, २०७८
कोरोना संकट: स्वास्थ्यकर्मी भोको पेटमा, सरकार राजनीतिक खेलमा यो बेला स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भोक, निद्रा, प्यास केहीको मतबल छैन। भोकै पेट पनि उनीहरु कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिरहेका छन्। शनिबार, जेठ १, २०७८
अस्पताल सँगै समुदायमा भइहेको नयाँ संक्रमणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने कि? समुदायमा संकास्पद बिरामीहरुको समयमा नै पहिचानका लागि एन्टीजिन परिक्षण किटको प्रयोग एउटा प्रभावकारी उपाय हो। शुक्रबार, वैशाख ३१, २०७८